Archive du 20171216
Fitondrana HVM Nahita hevi-baovao hamotehana an-dRajoelina
Tonga eto Madagasikara indray i Andry Rajoelina raha ny vaovao azo.
Hery Rajaonarimampianina Mirifatra tsy tana intsony
Sinema tsy misy ohatr’izany ! Nitaingina taksibrosy ingahy filoham-pirenena, nomban’ny praiminisitra sy ireo olona akaiky azy ao anaty governemanta dia i Beboarimisa Ralava,
Jean Max Rakotomamonjy « Tsy kandidà filoha izany aho »
Tsy mbola nieritreritra ny ho kandidà filoham-pirenena amin’ny 2018 aho, hoy ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Jean Max Rakotomamonjy, omaly, teny Tsimbazaza raha nanontanian’ny mpanao gazety tamin’ny feo niely tato ho ato izy.
Dadabenoely tampoka teo !
Miarahaba ry Jean an ! Mihazakazaka mihitsy ianao izany tato ho ato amin’ny fanaovana dadabenoely a ! Mbetika mitokana zavatra, mbetika mitsamboamboatra etsy sy eroa.
Trafikana Boaderozy Navotsotry ny fitsarana ilay zandary sy sefo distrika teo aloha
Nikatona ny fanadihadian’ny Bianco ny dosie lehibe momba ny fanondranana boaderozy tany amin’ny Faritra Soanierana Ivongo.
Olona efa nanamaintimolaly ny tany Tsy azo roahina intsony…
Heverina fa hanatsara ny fandaminana ny resaka fananan-tany eto Madagasikara ny lalàna vaovao momba ny fananan-tany izay efa lanin’ny parlemanta tamin’ny fotoam-pivoriana faharoa lasa teo iny,
Lanto Rabenatoandro Mitaky ny hanakatonana ny Socolait
“Akatony ihany koa ny Socolait sy ny Tarafy, dia aleo hitovy ny fitantanana ireo orinasa rehetra”, hoy ny tale jeneralin’ny AAA tiko,
Nambaran’ny depiote Harinosy Rabenerika Charlot voafidy tany amin’ny distrikan’i Soavinandriana Itasy teny Tsimbazaza omaly fa anisan’ireo vina hotanterahina ao anatin’ny CLD 2017 hatao any amin’ny distrika misy azy ny fananganana “caserne”
CNaPS sy FJKM Matotra ny fiaraha-miasa any Ambatolampy sy Antsirabe
Synodam-paritany roa dia Atsinanan’Ankaratra Fahazavana na ny SPAA 38 sy ny Synodam-paritanyAndrefana Atsimon’Ankaratra Miara-dia SPAA8 no nahazo fiofanana avy amin’ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy (CNaPS) nandritra ny roa andro tao amin’ny SAF FJKM /AkanyVohitsoa FOFIAF/Ambatolampy ny 12 sy 13 desambra lasa teo.
Boriborintany faha-3 eny Antaninandro Havadika nomerika ny tahirin-kevitra rehetra
Lanonana tsotra nefa nanana ny lanjany no notanterahana tetsy amin’ny foiben’ny boriborintany faha-3 Antaninandro ho fanamarihana ny faha-30 taona nifindrany ao amin’ny trano misy azy ankehitriny.
Antandrokomby Anosizato Tafakatra 48 tafo sahady ireo traboina
Tafakatra 48 tafo sahady, misy fianakaviana 72 isa ahitana olona 370 ao amin’ny fokontany Antandrokomby, kaominina Anosizato Andrefana.
Fiatrehana ny fahavaratra Efa mampanao fanazaran-tena ny BNGRC
Mba hahafahana miatrika amim-pitoniana ny fiavian’ny ranon’orana, indrindra fa ny fiatrehana loza voajanahary mba tsy hamoizana ain’olona dia efa mirotsaka an-tsehatra mampanao fanazaran-tena ny mponina amin’ny faritra maro ankehitriny ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary.
Lalao THB Cover contest Lasan’i Voary Lucas Ratsimbazafy ny lokabe
Lasan’i Voary Lucas Ratsimbazafy, tovovavy kely efa mpihira ihany ny loka tamin’ilay fifaninanana mamorona ny hiran’ny THB tamin’ilay lalao “THB Cover Contest” nokarakarain’ny vondrona Star.
HAFARI Malagasy Nanome asa ho an’olona 350
Mitohy hatrany ny asa sosialy entina hanasoavana ny mpiara-belona tanterahin’ny fikambanana HAFARI Malagasy.
Ambatolampy-Vakinankaratra Tsy manaiky ny hidiran’ny Sinoa hitrandraka volamena
“Aleo misoroka toy izay mitsabo”, hoy ny depiote Randrianjanahary Soloniaina Olivier voafidy tany amin’ny distrikan’Ambatolampy Vakinankaratra,
Fifidianana filohan’ny Ligy Gidragidra ny tany Fianarantsoa
Natao omaly nanerana ny nosy ireo fifidianana ny ho filoha hitantana ny ligim-paritry ny baolina kitra eto Madagasikara. Fantatra fa 4 amin’ireo faritra 19 nanatanterahana ny fifidianana no nahazo filohan’ny ligy vaovao.
Ady totohondry Malagasy Tsy mahazo mitantana ny federasiona intsony i Hery Mamy
Tapitra ny 72 ora nomen’ny “Comité exécutif” ny filohan’ny federasion’ny taranja ady totohondry Malagasy hametrahany fialana tsimoramora amin’ny fitantanana ny federasiona.
Tsipy kanetibe tompondakan’i Madagasikara Boss Open Any Fianarantsoa ny 16 sy 17 desambra 2017
Ny boulodrôme Ampasambazaha any Fianarantsoa no handray ny fifaninanam-pirenena fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “Boss Open” olon-telo miaraka lehilahy karakarain’ny federasion’ny taranja tsipy kanetibe eto Madagasikara manomboka anio sabotsy 16 ary hifarana ny alahady 17 desambra 2017.
Angamba efa tantara sisa ny hoe fampihavanam-pirenena eto Madagasikara, toa natsangana atao haingon-drafitra fotsiny ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy.
Fifamoivoizana gaboraraka Toy ny tany tsy misy lalàna Antananarivo
Toa samy manao izay saim-patany ny rehetra amin’ny resaka fifamoivoizana ka tsy mahagaga raha mahazo vahana ny fitohanana eto Antananarivo.
Gare Routière MAKI Hiasa amin’ny fiandohan’ny taona 2018
Notokanana tamim-pomba ofisialy omaly ny asa fanamboarana ny toby fiantsonana vaovaon’ny taksibrosy etsy Andohatapenaka nantsoina hoe Gare routière MAKI.
Lalan-dratsy mankeny Itaosy Miantso ny fanjakana hiasa ny depiote Voahangy R
Mitaraina mafy amin’ny faharatsian-dalana mampitohy an’Itaosy sy Behenjy ary Ampasika iny izahay eny Atsimondrano eny, hoy ny depiote voafidy tany an-toerana, Voahangy Raharimanarivo, satria raha fiara ivaiva dia latsaka mihitsy noho ny hadirin’ireo lavaka.
Tombola “Lay Tsena B” Lasan’i Melly Andrée ny « Hyundai Terracan »
Melly Andrée, renim-pianakaviana iray, no tsara vintana nandrombaka ny fiara marika « Hyundai Terracan », tamin’ny lalao tombola lehibe tao anatin’ilay hetsika « ‘Lay Tsena B » andiany voalohany,
Saint Jean Baptiste de la Salle Imerinafovoany Notokanana ireo efitrano 8 vao nohavaozina
Notokanana tamim-pomba ôfisialy ny alakamisy teo ireo, ny efitrano vaovaon’ny sekoly masindahy Jean Baptiste de la salle Imerinafovoany, rehefa avy nohavaozina.